Momba anay - Hebei Finutra Biotech Co., Ltd.
Finutra dia nanolo-tena ho mpamatsy vola ho an'ny rojom-pamokarana manerantany, manolotra karazana akora betsaka sy akora ilaina amin'ny maha mpanamboatra, mpizara sy mpamatsy ho an'ny zava-pisotro eraky ny zava-pisotro eran-tany izahay, ny sakafo ara-tsakafo, ny sakafo, ny sakafo ary ny indostrian'ny cosmeceutika.
Ny kalitao, ny fampiharana ary ny fitadiavana dia ny andry manohana ny fototry ny rafitray sy ny tanjontsika. Manomboka amin'ny drafitra ka hatramin'ny fanatanterahana, fanaraha-maso, fanidiana ary fanamarihana, ny fizotrantsika dia voafaritra mazava tsara eo ambanin'ny fenitra indostrialy ambony.
Niorina tamin'ny 2005, Finutra Biotech dia nirotsaka tamin'ny akora vita amin'ny fikarakarana fanafody nentim-paharazana sinoa ho toy ny orinasa ISO mendrika. Tamin'ny taona 2010, nikarakara ekipa R&D izahay ary nampiroborobo ny sokajy vokatra ho an'ny andian-tsarimihetsika Microencapsulated Carotenoids azo alaina toy ny vovo-dronono mangatsiaka (CWS), beadlets ary fampiatoana solika / oleoresin hihaona amina karazana fampiharana famolavolana. Tamin'ny taona 2016 dia nanangana Finutra Inc. izahay, nanangana USA Warehouse. Serivisy isam-baravarana namboarina, manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny taonina, hatramin'ny famenoana haingana ny entana ary mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay.
Ny fahaizantsika manararaotra anao, miaraka amin'ny 350,000 metatra toradroa ny toerana famokarana sy ny fitahirizam-bokatra, ary koa ny drafitra fanitarana mitohy, manome toky i Finutra fa hitondra kalitao sy serivisy avo lenta kokoa ho an'ireo mpanjifa hajaina eran'izao tontolo izao.